Imifino ingumthombo ophanayo we-microelements namavithamini, ngenxa yokuthi sibheka impilo enhle futhi enhle. Ukungena emzimbeni, kushukumisa ukufihla, kanye nesenzo sejusi lokugaya. Ngaphezu kwalokho, ama-saladi avela emifino yindlela ehle kakhulu yokulahlekelwa isisindo. Ngezansi kukhona izindlela zokudla zesaladi zokulahlekelwa kwesisindo esisheshayo. Ngikholelwa, lezi izitsha azisebenzisi kuphela, kodwa futhi zinambitha kakhulu.
I-sweet light ikhukhamba isaladi "Ukuhlanzeka" - enye yezindlela zokupheka ezisezingeni elihle kunazo zonke nezokuqala zokuphuza isisindo esisheshayo.
Umphumela wokuphefumula walesi isaladi uzozizwa usuvele usulungiselele. Ngempela, ukulungiselela "Ukuhlanza", kufanele usebenze kancane. Isidlo sinama-calorie aphansi kangangokuthi ungayidla cishe cishe kunani. Enye inzuzo yalesi isaladi kungenzeka ukuthi uyayigcina esiqandisini izinsuku ezimbalwa (izimfanelo zokunambitheka azidli nakancane).
Ingxenye eyinhloko yesaladi "Ukuhlanza" ikhukhamba. Uzodinga futhi ama-sprigs ambalwa we-dill, ama-tablespoons ambalwa wewayini elimhlophe, i-sugar substitute kanye nosawoti. Ngakho-ke, cwenga ikhukhamba esikhumbeni esinzima bese uyinquma ibe tincetu ezincane (okuncane kakhulu, okungcono), faka imibuthano e-colander bese ufafaza usawoti ukunambitha. Ngendlela, izikhumba zekhukhamba ziwumkhiqizo omuhle wezithokozi ozokwenza isikhumba sakho sikhanyise futhi sishaye. Vele usule nabo ngobuso emva kokugeza.
Faka i-colander epulazini elijulile (ukuze ijusi lingagcini etafuleni). Ukhukhamba umboza nge-plate encane, ngaphezulu obeka into enzima. Manje udinga ukulinda isigamu sehora, kuyilapho ikhukhamba izovuza imfucuza eyengeziwe.
Esikhathini esipanini elincane uthele izipuni ezimbalwa zamanzi, okungenani iwayini elimhlophe iviniga. Engeza isabelo somshukela omncane. Letha ingxube emathumba phezu kokushisa okuphansi bese ususa ngokushesha.
Susa umthwalo kusuka ikhukhamba, susela imibuthano emanzini apholile, owomile, ubeke ipuleti. Dill Dweba kahle bese uxuba uviniga ingxube. Thela lokhu ukugqoka ngamakhukhamba. Gcoba isidlo bese usishiya emakhazeni amahora ambalwa. Isaladi yesisindo sokulahlekelwa isilungile! Iresiphi ilula kakhulu, akunjalo?
Le dish enhle, ehlanzekile, ephuziyo ngeke inikeze kuphela ama-curve akho anomusa, kodwa izophinde ihlukanise ngempumelelo imenyu yakho yansuku zonke.
Isaladi eguquguqukayo yemifino "Ihlobo"
Ukuze uzihlanganise nalesi isaladi esiphundu futhi ewusizo, uzodinga imikhiqizo elandelayo: 1 ikhukhamba, 2 utamatisi ophakathi, 2 i-pepper ephakathi nendawo (i-orange nephuzi), ijusi kalamula, ama-sprigs ambalwa e-dill, i-parsley ne-basil, i-bunch of zhiruha (i-watercress) Usawoti noshukela esikhundleni sokunambitha.
Gcoba isitsha esicwebezelayo ngamaqabunga e-watercress. Phezu kwazo, faka utamatisi, pepper kanye ukhukhamba uthathe izindandatho. Enkomishini, hlanganisa izipuni ezimbili zamanzi, ushukela esikhundleni, usawoti, izipuni ezimbili zamanzi kalamula. Dill ne-parsley nqabisa kahle, engeza engxenyeni endebeni. Ukuxuba okuxubile okuxubile kahle bese uthele ngemifino, efakwe endizeni. Isaladi ukuhlobisa ngamaqabunga ase-basil. Bon appetit!
Isaladi "Ukuhlanganiswa" - isidlo esihle kulabo abalandeli be-cuisine yendabuko yaseRashiya.
Azikho izinongo ezikhohlisayo noma imikhiqizo ku-isaladi ehlanganisiwe. Iqoqo lezithako lilula: utamatisi omude ophakathi, 2 upelepele obomvu (ophuzi nobomvu), amaphiko amabili ama-anyanisi aluhlaza, ama-2 ama-leeks, ama-2 wezipuni e-parsley eqoshiwe, 1 ingilazi yemifino yemifino, usawoti ukunambitha.
Pepper usike ukuthi umhlubu, utamatisi ngesigamu, usike u-anyanisi oluhlaza kanye namahlumela. Sika imifino ibe yizingqimba ezitsheni ezingenakushisa, usawoti ukunambitha, ugcwalise umhluzi wemifino, ikhava bese ubeka kuhhavini imizuzu engama-30, ulungiselwe iziqu ezingu-180. Ngaphambi kokuba bakhonze, babhaka amaqabunga bafafaza nge-parsley.
Isaladi ye-traffic " isipho esiqhakazile sasehlobo futhi iresiphi enhle kulabo abafuna ukunciphisa umzimba.
Le ulethisi le-salad ehlobo ngeke likusize nje ukuba ulahle amentimitha engeziwe esikhwameni esifushane, kodwa futhi iyophakamisa imizwa yosuku lonke ngokukhanya kwayo nokungajwayelekile. Ngakho-ke, ukulungiselela isaladi "Traffic Light" kuzodingeka uthole imikhiqizo elandelayo: 3 izinambuzane ezinkulu zebell (obomvu, ophuzi nohlaza), amakhowe amakhulu ayisithupha, utamatisi amancane amancane, ama-clove angu-3, ​​i-capers ayisithupha, amagatsha amaningana ase-basil, usawoti.
Ukunambitheka okukhethekile kwalesi sidlo kunikezwa i-spice oyintandokazi yamaNtaliyane - basil - isitshalo esinambitheka kancane kancane futhi iphunga eliyingqayizivele. I-Basil, njenge-chameleon, iyashintsha ukunambitheka kwayo, efana nezinye izinongo: amaqabunga omisiwe afana nokunambitheka kwe-curry, fresh - ekuqotheni. Okuhle kunabo bonke, basil, ngokusho kochwepheshe be-culinary, bangabangane abanama-capers no-utamatisi, ama-olivini ne-garlic.
Okunye okugqamile kwesaladi "I-Traffic Light" yi-capers - izinongo ezinezinambuzane ezimbi kakhulu, ezibabayo, ezisawoti futhi ezibukhali. Ungasheshe ukushiya lo mkhiqizo kuze kube phakade. Ezikhathini zasendulo ababusi abavotshwe ngezitsha zabo zobukhosi, befisa ukuqonda ngosizo lwabo imfihlakalo enkulu yokungafi.
Ngakho-ke, ake siqale ukulungiselela ukukhanya kwethu kwe-Traffic. I-pepper inqunywe phakathi kwezingxenye ezimbili, ususe ngokucophelela imbewu. Ama-champagne apheka, aphuzi, anqume kahle. Kumakhowe aqoshiwe engeza ugarlic ochotshoziwe, utamatisi kanye ne-basil. Lapha, uthele ngokucophelela ama-capers aqoshiwe. Ukuhambisa ngokucophelela ukugcwaliswa, usawoti ukunambitha, ufake i-oven engama-180 degrees emaminithini angu-20.
Isaladi "Amahle" - isidlo esimnandi esivela eBrithani.
Igama lalo linikezwe yi-component yalo eyinhloko - amahlaya. Lesi yisitshalo esiyisibonakaliso sesizwe saseWales. AmaSaladi, afaka ama-leeks, ukudla okuhle kulabo abafuna ukunciphisa umzimba.
Ekudleni, njengomthetho, izitshalo ezingamanga zombala omhlophe ziyasetshenziswa, ezinomnandi omuhle futhi ocebile, ukunambitheka okumnandi, okubukhali.
Ngakho-ke, ukuze ulungise isidlo esiwusizo futhi esihlwabusayo, udinga iziqu eziyi-10 ze-leek, pepper omnyama nezipuni ezimbili ze-soy sauce. Sika anyanisi bese ubilise. Kubaluleke kakhulu ukuthi ungagcini u-anyanisi, kungenjalo ngeke kube mnandi ngokunambitha nokubukeka. Ukuzinikela kwemifino kufanele kuhlolwe ngemfoloko: kufanele ufake umnsalo ngokukhululekile, ngokuphikiswa okuncane. Thatha anyanisi epanini nge-whisk, ugqoke isidlo, inkathi nge-soy sauce uphinde ufafaze uphethi omnyama.
Isobho se-soup - iresiphi yansuku zonke
Recipe for isaladi "Garnet isongo"
Ama-pancake afakwe ngemvubelo ngokugcwalisa zonke izintandokazi
Inhlanzi kuhhavini - zokupheka kwabaqalayo
Amabhontshi wokugaya ubusika kusuka eklabishi
USalmon wabhaka kuhhavini ngendlela yobukhosi
Ubulili bokuqala kanye nemiphumela yayo
I-Crispy yengulube iqoqa nge-apricot
Umphumela we-ionisation of air emzimbeni womuntu
Izici zengqondo zengane ezithintekayo esigabeni sezemidlalo
Amabhodi omuthi wendabuko kusuka ekuguleni kokuhamba ekuthutheni kwengane
Ukuthuthukiswa ngokomzimba kwengane ngonyaka wokuqala wokuphila
Indlela yokuba i-redhead ekhaya: ama-recipes we-henna-based staining zokupheka
Ukupheka okulula futhi okumnandi konyaka omusha 2017 ngesithombe sabapheki abahamba phambili - Ngaphandle kwenkukhu kanye nayo
Ungasusa kanjani izimonyo emehlweni?
Igumbi, umgibeli nomntwana ubhakwe